CrankWheel: Fandaharam-potoana sy fampidinana bypass miaraka amin'ny hetsi-panoherana miorina amin'ny browser Instant | Martech Zone
Talata, Febroary 16, 2021 Talata, Febroary 16, 2021 Douglas Karr
Ny fifampiraharahana rehetra takiana eo anelanelan'ny vinavina miaraka amina fikasana hanao fividianana sy ny fahafahan'ny ekipa mpivarotra anao manampy azy ireo hiova dia mety hampihena ny fahafahan'ny fiovam-po. Anisan'izany ny fotoana hamaliana, isan'ny tsindry, isan'ny efijery, isan'ny singa endrika… zavatra rehetra.
Ireo matihanina amin'ny varotra izay fantatro fotsiny dia te-ho eo anoloan'ny fanantenana. Fantatr'izy ireo fa rehefa afaka miresaka amin'ilay prospect izy ireo, mamantatra ny olany ary mizaha azy ireo amin'ny vahaolana… dia azo inoana fa hanova azy ireo ho mpanjifa izy ireo.
Orinasa maro no manao an'io fanandramana mahatsiravina io. Izahay dia mameno ireo takelaka takiana mialoha amin'ny mari-pahaizana, asainay mangataka vaovao izy ireo, izahay manomana ny fotoana voatondro ho azy ireo… ary avy eo gaga izahay fa manana ny taham-panovana mahatsiravina ny fahafahanay mahazo mpitarika mendrika any amin'ny departemantan'ny varotra ataonay.
Demo Instant CrankWheel
Ahoana raha, miaraka amina saha tokana ianao, dia afaka mandeha avy hatrany amin'ny fangatahan'ny prospect amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpivarotra misokatra? Mangataka fotsiny ny nomeraon-telefaonany ianao, mampikambana azy ireo ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpivarotra… ary tsy misy fampidinana rindrambaiko na dingana fanampiny… afaka manomboka mampiseho ny vokatrao na serivisinao izy ireo?
Demo Instant CrankWheel izany ve no vahaolana. Ireo mpitarika ny varotra erak'izao tontolo izao dia mampiasa CrankWheel hizara avy hatrany ny efijeriny amin'ny prospect - tsy ilaina ny fisintomana. Amin'ny fampiasana ny Extension Chrome azy ireo, ny ekipan'ny varotrao dia afaka mampiseho ny vinavinanao amin'ny alàlan'ny findainy na ny birao ao anatin'ny 10 segondra.
Tsy izany ihany, satria mizara ny nomeraon-telefaonany izy ireo… CrankWheel koa dia manandrana mamantatra sy mamerina angon-drakitra fitsikerana momba ny fanantenana mba hahafahanao manana lohandohany amin'ny fahafantarana hoe iza izy ireo, ny orinasan'izy ireo, na mety hisy na tsia mahafeno fepetra ho mpitarika.
Mandritra ny fivoriana ataoko isan'andro miaraka amin'ny vinavina dia mampiasa CrankWheel aho hanolotra ny serivisinay amin'ny Internet. Tena manampy ahy hampiseho endrika haingana sy tsy mametraka programa amin'ny solosain'ilay prospect aho.
Quentin Roquet, CEO an'ny Progenda
Fomba sy tombontsoa azo avy amin'ny CrankWheel
Mahita ireo mpampiasa CrankWheel fiakarana 22x amin'ny isan'ny demo afaka manomboka izy ireo noho ny Demo Instant.
Fisamborana firaka resahana - Mahazoa fitarihana bebe kokoa noho ireo endrika fifanakalozan-kevitra namboarina tanteraka azonao alefa ao amin'ny tranonkalanao na amin'ny fampielezana mailaka. Mampandre haingana ny dokambarotra momba ny varotra miandry ny antso, amin'ny efijery ary amin'ny hafatra an-tsoratra.
Fampiroboroboana fitarihana - Ampiasao amin'ny fomba azo ampiharina ny fampahalalana fifandraisana madinidinika amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana izany amin'ny fampahalalana mifandraika toy ny toerana, orinasa, rohy sosialy sns Mamorona rakitsoratra CRM feno kokoa ary fantaro bebe kokoa momba ny fitarihanao.
Integration - Valio ireo fitarihana vokarin'ny tranonkala eo noho eo nefa tsy mila ampidirina amina fampiharana enablement fivarotana maro. Mora manampy a Antsoy aho izao or Mangataha Demo bokotra mankany amin'ny tranokalanao. Ny fitarihana dia afaka mikoriana mivantana ao amin'ny CRM na rafitra hafa ampiasainao amin'ny iray amin'ireo fampidirana maro azo.
Mamorona Kaonty Demo Instant maimaim-poana CrankWheel
Fitsangatsanganana Demo Instant CrankWheel
Ity misy horonantsary topimaso momba ny vahaolana na avy amin'ny traikefan'ny mpampiasa ny prospect na ny zavatra niainan'ny ekipa mpivarotra. Malama tsara!
Fampahafantarana: Izaho dia mpiara-miasa amin'i CrankWombelahin-tongony.
Tags: antsoy izaochrome extensioncrankwheelfampisehoana crankwheel eo noho eoCRMgoogle chromedemo avy hatranyfanatsarana firakamangataka demodata momba ny varotraPikantsary